စစ်ကိုင်းတိုင်း စည်ပင်၏ စီမံမှုအလွဲများကို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးနောက် ဌာ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်း စည်ပင်၏ စီမံမှုအလွဲများကို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးနောက် ဌာ??
မုံရွာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး စည်ပင်သာယာကဏ္ဍစီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများအား အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်သည့်ကိစ္စ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက် တစ် ဌာနချင်းအလိုက် စစ်ဆေးမှုများပြု လုပ်နေကြောင်း စည်ပင်သာယာ ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်က မုံရွာ မြို့တွင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးနောက် မုံရွာစည်ပင်၏ ဘတ်ဂျက်ငွေများ စာရင်းမကိုက်မှုကို သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲပြုလုပ်၍ ချပြခဲ့သည်။
”အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောထား တဲ့အချက်တွေကို အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ လမ်းဌာန၊ သန့်ရှင်းရေးဌာနစသ ဖြင့် ဌာနချင်းအလိုက် စစ်ဆေးမှု တွေလုပ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေသိ ချင်နေတဲ့ဟာတွေကို စစ်ဆေးပြီး ရင် ရှင်းပြသွားမှာပါ”ဟု စစ်ကိုင်း တိုင်းစည်ပင်သာယာရေးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးသစ်ထူးမြင့်က ပြော သည်။ အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင် လမ်းဖာခြင်း၊ လမ်းဘေးရေ မြောင်းနှင့် အဖုံးများ၊ ဈေးများခြံ စည်းရိုးခတ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြား သောအကြောင်းအရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ပြပြောခဲ့သည်။
လတ်တလော ဌာနချင်းအ လိုက် စစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက် ၍ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က မည် သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားသည်၊ ဖြေရှင်းထားသည်များကို အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စောင့်ကြည့် နေပြီး မြို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အပြောင်း အလဲမတွေ့ရပါက အဂတိတိုက် ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထားသည်။
နတ်မတောင်ပေါ်တွင် အမှိုက်များ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နိုင်ရေး ကန်ပက်လက် လူငယ်အဖွဲ့ဆောင်ရွက်မည်
”နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် စတော့အိတ်ချိန်းဆိုတာ ??
မိုးညှင်းတွင် လမ်းနှင့်မလွတ်သဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည့်သူများ စိတ်ကြိုက်နေရာရရှိရေးတောင်းဆို
MAMA ဆုပေးပွဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့